[DEG DEG]:- Khilaafkii Ugu Cuslaa Oo Wali Ka Dhex Taagan Madaxda Garoowe Iyo Camay Oo Dalbaday In La Dhexdhexaadiyo Gaas
Thursday 7th June 2018 11:42:33 in Wararka by Super Admin
Khilaaf muddo soo taxnaa ayaa wali ka dhex taagan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maamul-gobolleedka Puntland.
Khilaafkan ayaa xilligan u muuqda mid sii xoogaysanaya.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo shalay kusoo laabtay magaalada Garoowe ayaan soo dhawayntiisii lagu arag ku-xigeenkiisa Camay iyadoo warar lagu kalsoon yahay sheegayaan in muddo laba bilood ah aanay marna kulmin labadan masuul ee ugu sareeya maamulka Garoowe.
Khilaafkan ayaa salka ku haya kala duwanaasho dhinaca khaliijka iyo waliba colaada ay ka wadaan gobolka Sool.
booqashadii uu toddobaadkii hore ku tagay Garoowe ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ayuu Mr. Camay kulan kula qaatay gurigiisa gaarka ah taasi oo ka dhigan in Camay aanu muddo u shaqo tagin aqalka madaxtooyada ee maamulka Garoowe.
Mr. Camay ayaa ka dalbaday ergeyga gaarka ah inuu xaliyo khilaafka iyo Gaas hasayeeshee waa uu ka cudur daartay ergeygani isagoo farta ugu fiiqay in shaqada uu hadda u imid tahay arrinta colaada ka taagan Tuke-raq.
Isku soo wada duubo colaada xilligan ka dhex taagan labada masuul ee ugu sareeya maamulka Garoowe ayaa imanaysa iyadoo wax ka yar lix bilood ay ka hadhsan tahay doorashada maamulkaasi.